Taariikh Nololeedkii Halgamaa Cabdulaahi Ciise
NATIIJADII DAGAALADII SOOMAALIYA | DAAWO SAWIRADAN
Burburka Bangigii Ganacsiga ee Soomaaliya ee Muqdisho | Sawirkan waxaa la qaaday 2006, waxaana qaaday Muuse Maxamuud Jiisow
Sawirka hoose waa Muqdisho sannadihii soddonkii (1930)
Muqdisho: 1930's | Isha sawirkan: http://www.swan.ac.uk
1922-kii ayuu C/llaahi Ciise Maxamuud ku dhashay Degmada Afgooye ee Gobalka Sh/hoose, Allaha u naxariistee, Aabbihii isaga oo yar ayuu dhintay, waxaana soo korisay Hooyadiis, Alle ha u naxariistee Mareero Diini, C/llaahi Ciise iyo Hooyadiis Xamar ayay u soo wareegeen, haljaas oo uu ka bilaabay dugsiga Qur’aanka iyo waxbarashadiisii H/ Dhexe.
1938-kii, C/llaahi Ciise, isaga oo jira lix iyo toban sano, ayuu ka qalin jabiyey, dugsiga sare ee Talyaaniga wuxuuna noqday maamule xafiis.
1943-kii, C/llaahi Ciise, wuxuu ka mid noqday Golihii Dhexe ee S.Y.L.
1944-kii, C/llaahi Ciise, wuxuu laantii ugu horreysa ee S.Y.L ka furay Magaalada B/weyne
15-5-1947-kii, sanad-guuradii 4-aad ee S.Y.C, waxaa la doortay hoggaan cusub, oo ay yeelatay S.Y.C. waxaa xoghaye cusud loo doortay halgame C/llaahi Ciise Maxamuud.
Mudane C/llaahi Ciise si halganka loo dardar galiyo waxaa uu keenay qorshe siyaasadeed (Political program) magacii hore ee SYC waxa uu u beddelay S.Y.L (Somali Youth League) waxa uu soo saaray barnaamijkiisii siyaasadeed oo ka koobnaa shan qodob oo kala ahaa.
1. In la raadiyo gobanimadii iyo xorriyaddii shanta Soomaaliyeed oo midaysan.
2. In lala dagaalamo dhaqanka kala qaybinta ee qabyaalada ku dhisan
3. In laga taqaluso ciddii ka hortimaada danta Soomaaliyeed.
4. In waxbarashada lagu baahiyo dalka lana dhiso aqoonta iyo waxqabadka dhalinyarada.
5. In la qoro afka Soomaaliga.
1947-dii bishii November halgame C/llaahi Ciise Maxamuud, waxa uu gudoomiyay fadhigii taariikhiga ahaa ee golaha dhexe ee S.Y.L ku gaareen mudo 10 sano ah ee truteeship-ka ay gaarsiiyaan guddi ka kooban afartii quwadood ee markaas jiray (Four power commission) kuwaas oo dalka yimid 7-dii January 1948-kii
11-1-1948 halgame C/llaahi Ciise Maxamuud oo ku sugnaa Xarunta S.Y.L ayaa Por-Talyaanigii soo weerareen Xafiisyadii Xarunta S.Y.L,halkaas oo uu ka bilowday dagaalkii Ha Noolaato oo ay ku geeriyoodeen 52 ruux oo Talyaani ah 15 ruux oo Por-Tayaani iyo Xaawo Cusmaan ”Xaawo Taako”.
20-1-1948- mudane C/llaahi Ciise Maxamuud wuxuu qaabilay Four power commission wuxuu u gudbiyey qorshaha siyaasadeed ee S.Y.L oo ahaa in muddo 10 sano ah Soomaaliya xorriyaddeeda lagu gaarsiiyo ayna gaarsiiyaan guddi ka kooban Four Power Commission.
31-10-1948 Halgame C/llaahi Ciise Maxamuud iyo Xaaji Ibraahim Cigaal waxay u direen Xoghayihii guud ee Qaramada Midoobay Mr. Trygve lie warqad (memo) ah oo ay ugu sheegeen in Soomaalida inteeda badan ay doonayaan in Soomaaliya oo midaysan ay xorriyadda gaarsiiyaan afartii quwadood ee markaas jiray.
28-10-1948dii wuxuu ka dhoofay dalk si uu uga qaybgalo shir ka dhacay Baris oo Four Power Commission uga hadlayeen arrimaha Soomaaliya. Isticmaarkii Ingiriiska wuxuu ugu talagalay in uu ku mudo Talaal sun ah C/llaahi Ciise Maxamuud. waxaa C/llaahi Ciise iska dhigay oo run ahaantiina ay isku ekaayeen mudane Maxamed Yuusuf Aadan ”Muuro” C/llaahi ahaan loo talaalay lix biloodna ujiifay sariirta talaalkaas awgiis.
30/10/1948-dii Halgame C/llaahi Ciise waxa uu ka degay Magaalada London waxaana soo dhaweeyay Ducaale Max’ed oo ahaa xoghayihii SYL ee Cardiff iyo Ibraahim Max’ed oo ahaa Xoghayihii ee Liverpooll.
3/11/1948-dii Halgame C/llaahi Ciise Maxamuud waxa uu la kulmay Xoghayaha arrimahad dibadda ee dalka Ingiriiska.
Maarso 1949-kii Halgamaa C/llaahi Ciise Maxamuud waxa uu tagay xarunta Qaramada Midoobey ee New York halkaas oo uu ka waday Diplomaasiyaddii uu xoriyadda Soomaaliya ugu raadinayay.
13/6/1949-kii Halgame C/llaahi Ciise Maxamuud isagoo ku sugan Magaalada New York waxa uu SYL u soo diray qoraalkii caanka ahaa ee la magacbaxay Appello ai Somali oo ugu sheegay SYL qatarta uu wato qorshaha Sforza Bevin Plan, arrintaas oo misana Qaramada Midoobey ku kala jabtay.
21/11/1949-kii Halgame C/llaahi Ciise Maxamuud waxa uu suurageliyay in Qaramada Midoobey Koonfurta Soomaaliya xoriyadda lagu gaarsiiyo mudo toban sano ah Trusteeship-kana uu maamulo Talyaaniga, iyadoo la dhinac dhigay Guddiga Qaramada Midoobey ka socday oo ka kooban dalalka Masar, Filibiin, Colombia oo ilaalinayay howlaha xoriyadda gaarsiinta si ay ula socdaan.
18/10/1950-kii Halgame C/llaahi Ciise Maxamuud dacwad ayuu u qoray Qaramada Midoobey ee uu ku eedeenayo maamulka AFIS oo uu ka leexday waajibaadkii loo xilsaaray, waxa uuna ka codsaday Qaramada Midoobey in la sameeyo guddi la tashi (Consultative Council) oo awood u leh, wuxuu kalloo Qaramada Midoobey ka codsaday in Soomaaliya laga difaaco Ajnabiga ku soo qulqulaya gaara haan kuwa Talyaaniga ah.
18/10/1950 Halgame C/llaahi Ciise Maxamuud dacwad ayuu u qoray Qaramada Midoobey ee uu ku eedaynayo maamulka AFIS in uu ka leexday waajibkii loo xilsaaray, wuxuuna ka ka codsaday Qaramada Midoobey in la sameeyo guddi la tashi “Consultavative Council) oo awood u leh, wuxuu kalloo Qaramada Midoobey ka codsaday in Soomaaliya laga difaaco ajnabiga ku soo qulqulaya gaar ahaan kuwa Talyaaniga ah.
1954-kii Halgame C/llaahi Ciise Maxamuud waxa uu ku guuleystay siyaasad ahaan in uu Qaramada Midoobey uu ku qanciyo in la isfeersuro calaamadda Qaramada Midoobey, Talyaaniga iyo midka Soomaaliya.
1956-1960-kii Halgame C/llaahi Ciise Maxamuud wuxuu ahaa Ra’isul Wasaarihii ugu horeeyay ee Soomaaliya, waxaana dowladaas lagu dhisay Sharci No=1 ee 7/5/1956-dii.
1959-kii Halgame C/llaahi Ciise wuxuu mar labaad ku guuleystay xilka Ra’isul Wasaaraha.
12/4/1960-kii Halgame C/llaahi Ciise waxa uu abaabulay saxiixayna dekereetadii lagu dhisay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, wuxuuna darajada Janeraalka u dalacsiiyay una magacaabay Taliyihii Ciidanka Xoogga dalka Soomaaliyeed Da’uud Cabdule Xirsi.
1960-1964-kii Halgame C/llaahi Ciise Maxamuud wuxuu ahaa Wasiirka arrimaha dibadda.
1964-1967-kii Halgame C/llaahi Ciise waxa uu ahaa wasiirka Caafimaadka.
1967-1969-kii Halgame C/llaahi Ciise waxa uu ahaa Wasiirka Ganacsiga iyo warshadaha.
1969-1973-kii Halgame C/llaahi Ciise waxa uu ka mid ahaa madaxdii Soomaaliyeed ee kooxdii Militariga ahayd ay inqilaabeen lana xirxiray isagoo oo si sharci darro ah xabsiga ugu jiray muddo afar sano ah.
1973-1984-kii Halgame C/llaahi Ciise wuxuu ahaa danjiraha Somaaliya u fadhiya dalka Sweden, isla markaana wakiil ka ahaa dhamaan waddamada la isku yirahdo Scandinavia.
24/3/1988-kii Allaha u naxariistee Halgame C/llaahi Ciise waxa uu ku geeryooday Magaalada Roma ee dalka Talyaaniga.
29/3/1988-kii Halgame C/llaahi Ciise maydkiisa ayaa dalka la keenay isla maalintaasna waa la aasay, waxaa loo aasay si heer Qaran ah, iyada oo halgamaashii SYL dhamantood ay aaskiisii ka soo qaybgaleen intii markaa nooleyd iyo guud ahaan dadweynaha Soomaaliyeed iyo Dowladdii JDS oo uu hogaaminayay Madaxweyne Jaale Max’ed Siyaad Barre, waxaana mudo saddex maalmood ah hoos loo dhigay calanka Soomaaliya, waxaana dalka oo dhan ka dhacay baroordiiq Qaran.
Allaha u naxariistee Halgame C/llaahi Ciise wuxuu guursaday laba Haween ah, xaaskii ugu horreeyay waxaa la yiraahdaa Faadumo C/lle Max’ed waxa ayna u dhashay Gabar la yiraahdo Xaawo C/llaahi Ciise, Xaawa iyo hooyadeed Faadumo C/lle waxa ay hadda ku nool yihiin dalka Sweden Magaalada Stockholm.
Xaaska labaad waxaa la yiraahdaa Ruqiyo Shiikh Xuseen Cismaan, waxayna u dhashay Carruurtan kala ah:
Cali C/llaahi Ciise, Faadumo C/llaahi Ciise, iyo Xaliima C/llaahi Ciise, waxayna dhamaantood carruurtaan iyo Hooyadoodba waa Ruqiyo Shiikh Xuseen hadda ku wada nool yihiin dalka Mareykanka Magaalada Virginia.
Dhinaca kale waxaa dhawaan Magalada muqdisho lagu qabtay xaflad aad u sareysay lagu xusayay sanadguuradii 18-aad ee ka soo wareegtay geeridii halgame C/llaahi Ciise waxaana ka qaybgalay qaybaha kala duwan ee bulshada oo uu ku jiray Cali Shidde Cabdi, iyadoo dadkii ka qaybgalay xaflaadaasi ay isla qireen in C/llaahi Ciise uu ahaa halyay aysan hilmaami doonin Shacabka Soomaliyeed, waxay kalloo sheegeen in C/llaahi Ciise uu ahaa nin ay ka go’nayd in Soomaaliya gaarto Midnimo iyo horumar.
Cali Shidde Cabdi waxa uu sheegay in loo baahan yahay in shacabka Soomaaliyeed ay ku dadydaan dariiqii uu falay Halgame C/llaahi Ciise oo uu sheegay in uu ahaa nin wadani ah oo ka hor jeeday Gumeysiga iyo kalkaalinayay.
Sidoo kale C/ qaadir Ibraahim Gacal Abkow ayaa waxa uu isna sheegay in Halgankii xoriyadda ee uu horseeda u ahaa C/llaahi Ciise haatan laga dhigay mid bacaad lagu lisay isagoo sheegay in taasi ay khasaaro u tahay shacabka Soomaaliyeed oo looga fadhiyay in ay halkii ka sii wadaa dadaalkii loogu jiray sidii Soomaaliya kor loogu qaadi lahaa si ay wax ula qaybsato bulsha weynta kale ee Caalamka.
Faafin: SomaliTalk.com | Maarso 27, 2006
Dr. Alnajjar oo Aad uga Dayriyey Xaalada Soomaalida.... | Sept 2, 2005
MINNEAPOLIS::: ARDAY QALIN JEBISEY:::::::: GUJI [WARAR HORE]